Odroid N2: yakanaka imwe SBC kune iyo Raspberry Pi | Mahara emahara
Odroid N2: yakanaka imwe SBC kune iyo Raspberry Pi
HardKernel ine mamodheru akati wandei e SBC Odroid mabhodhi inonakidza kwazvo, asi imwe yemhando dzekupedzisira dzakatangwa yaive Odroid n2. Pamusoro pezvo, kuva imwe yenzira dzakakurumbira kune Raspberry Pi, kune akawanda uye akawanda mapurojekiti anopa rutsigiro rwepamutemo kurudzi urwu rwebhodhi, saka iri mukana kana iwe usiri kuda kuve nezvinetso zvekuenderana.
Muchikamu chino ndichaedza kukuudza nezve zvese iyo ecosystem iyo HardKernel yakagadzira uye, kunyanya kunyanya, tarisa pane iyo Odroid N2 bhodhi. Pane zvinhu zvikuru zvekutsvaga kubva kune vanogadzira ...
1 Nezve HardKernel
2 Odroid akasiyana
2.1 Zvimwe zvigadzirwa zvinoenderana neOdroid N2 uye mamwe mabhodhi
3 Zvese nezve Odroid N2
3.1 Odroid N2 technical ruzivo
HardKernel Co. Ltd. ikambani inogara mu South Korea, uye izvo zvazove zvine mukurumbira nekuda kwechigadzirwa chayo, iwo mahwendefa eOdroid. Zita rayo rinobva mukubatana kweOpen + Android, uye kunyangwe hazvo Hardware isiri iyo yakavhurika sosi, zvimwe zvezvikamu zvekugadzira zvine ruzivo rwakavhurika kune wese munhu.
Iwe haufanire kutungamirirwa nekwakabva kweiyo Odroid brand, sezvo ivo vasina kuitirwa chete kumhanya Android. Mazhinji emamodeli ayo anokwanisa kumhanyisa akawanda anonyanya kuzivikanwa ekuparadzirwa kweGNU / Linux, ese ari mairi x86 vhezheni uye ayo akagadzirirwa ARM.
HardKernel ine huru akasiyana mahwendefa, chimwe chinhu chinoita kuti chinyatso kukosha kana iwe uchitsvaga chimwe chakasiyana. Kana iri Raspberry Pi, inogumira kutengesa maARM-based chips. Asi kana iwe uchitsvaga imwe ISA yesoftware binary nyaya, saka hauzove nezvakawanda zvekuita.
Pane kudaro, Android inopa zvakanyanya kuchinjika kune vashandisi vayo mupfungwa iyoyo kusarudza pakati pezvivakwa zvakasiyana. Semuenzaniso, unogona kuwana aya mapoka eOdroid board:
Kubva paARMMupfungwa iyi, unogona kuwana mabhodhi anofambiswa neAmlogic machipisi uye zvakare ne Samsung Exynos machipisi, pamwe nemamwe akasarudzika Rockchip mamodheru.
Amlogic: chikamu ichi chinosanganisira Odroid C0, Odroid C1, Odroid C2 uye Odroid N2 mhando.
Samsung: Unogona kuwana mhando senge Odroid XU4 uye XU4Q, Odroid HC1 uye HC2, uye Odroid MC1.
rock chip: Kune zvakare chimwe chinhu chakadai seOdroid GO yakagadzirirwa kugadzira inotakurika retro mutambo wekunyaradza.
X86-yakavakirwa: Kana iwe uchida dhizaini ine yakawanda software, saka unofanirwa kusarudza imwechete yaunoshandisa yako PC. Idzi Intel Celeron J4115 machipisi ari paOdroid H2 + mabhodhi.
Zvimwe zvigadzirwa zvinoenderana neOdroid N2 uye mamwe mabhodhi
Pamusoro pevamwe ve zvemagetsi zvinhu inotsanangurwa muichi blog kune maGPIO ebhodhi iri, zvakare HardKernel ine mijenya ye accessories uye zvekuwedzera yemabhodhi ako, kubva kumagetsi emagetsi, kuenda kuLCD skrini, makadhi ekurangarira, makamera, zvekushandisa zvine mutsindo, mabhatiri, kusimudzira, zvinobatanidza, uye zvimwe zvakawanda.
Ehezve, kwete chete kune iwo maOdroid mamwe maRaspberry Pi, kune hupenyu hunopfuura ipapo futi. Semuenzaniso, unogona tenga mahwendefa akadai se:
ASUS Tinker Board: ne Rockchip RK3288 QuadCore ARM SoC pa1.8Ghz neMali-T764 GPU, 2GB yeDDR3 DualChannel RAM, Ethernet, rutsigiro rwe4K, TinkerOS, uye mukana wekuita akawanda mapurojekiti eI DIY nayo.
Odroid XU4- Imwe vhezheni yeOdroid ine Samsung Exynos 5422 chip yakavakirwa paCortex-A15 uye Cortex-A7 OctaCore, Mali-T628 GPU, 2GB yeLPDDR3, eMMC flash, USB 3.0, HDMI, Ethernet, nezvimwe.
ROCK64: bhodhi ine 64-bit Rockchip SoC, 4GB ye RAM, USB 3.0, 4K rutsigiro, 128GB flash, nezvimwe.
IweYeetoo Lenovo Leez P710: SBC board yakanyanya kutarisana neIoT, ine CPU ine simba neGPU, 4GB ye RAM, 16GB yeMMC flash, kugona kukuru kwekubatanidza, AOSP Android uye Ubuntu Core rutsigiro, ...
Raspberry Pi 4 4GB Muenzaniso B +: inonyanya kudiwa, yazvino vhezheni yeiyi SBC bhodhi.
Zvese nezve Odroid N2
Pakati pezvinhu zvese zveHardKernel zvatakasara nazvo Odroid n2, chinonyanya kunakidza pane zvese. Iri bhodhi nderimwe remazera azvino kuti ribude mufekitori iyi uye rakagadziridzwa kuti ripe mashandiro akakura kupfuura ayo akatangira, riine simba rakanaka rekuita uye mikana mikuru. Kuwedzera simba, nekukurumidza, kugadzikana kupfuura iyo N1.
Uye zvese nekuda kwehunhu hwayo hwehardware, kutanga neSoC iyo inosanganisira yakasimba CPU ichibva pa hombe.DUKU dhizaini. Ndokunge, inosanganisa sumbu remaviri ARM Cortex-A53 CPU cores ine simba rakanyanya kushanda uye kudzika mashandiro uye rimwe sumbu remaviri ARM Cortex-A73 cores pa1.8 Ghz ine yepamusoro kuita.
Izvo zvinobudirira izvi kuisa imwe kana imwe sumbu remakore kushanda mukuita zvichienderana nekuita kunodiwa panguva imwe neimwe zvichienderana nebasa rekuita. Saka iwe unogona kununura mashandiro paunenge uchiida uye yakaderera kushandiswa kana macores avo madiki akakwana kumhanyisa mabasa.
Uye zvakare, iyo SoC inosanganisa chizvarwa chine simba uye chitsva cheiyo Mali-G52 GPU saka OpenGL yakavakirwa magirafu haisi hombe dhiri kune ino diki SBC bhodhi. Yese chip inovakwa mu12nm tekinoroji uye ine hunyanzvi hwekupisa kupisa uye nesimbi heatsink yakawedzerwa seyakajairwa kudzora iyo inogadzirwa kupisa.
Ndangariro inowedzerwa kune ese ari pamusoro DDR4 mhando RAM inosvika 4GB. Zvese izvo set zvinounza mashandiro kumusoro 20% pamusoro peOdroid N1 pane multicore.
Kana ari Software, inogona kumhanyisa masisitimu anoshanda eGNU / Linux, kuti ugone kusarudza yako yaunofarira ARM distro yaunoda, kubva kuBuntu, kuburikidza nevamwe vakaita seyakavhurikaUSUSE, kuenda kuArc Linux. Uye zvakare, sekutaura kwandakamboita pamusoro, kuve risingazivikanwe bhodhi, kune akati wandei masisitimu anoshanda ayo anopa mifananidzo iyo zvakare yakanangana neOdroid N2.
Ehe unogona zvakare kumhanya Android, kubva pachirongwa 9 kuenda kune vamwe. Asi mune ino kesi, kana yekubata skrini inoshandiswa, saka inogumira kune 2K, nepo vhidhiyo yacho ingave 4K.
Odroid N2 technical ruzivo
Kupfupisa uye kuisa mumapoka avo vese technical information, heino runyorwa rweakakosha mapoinzi:
SoC: Amlogic S922X Quad-Core 2x Cortex-A53 pa1.9Ghz + 2x Cortex-A73 pa1.8Ghz. 64-bit ARMv8-A ARM ISA ine Neon uye Crypto yekuwedzera. Ndiine Mali-G52 GPU ine zvikamu zvitanhatu zvekuuraya pa6 Mhz.
Memory: 4GB ye RAM DDR4 PC4-21333. EMMC flash chengetedzo inosvika ku128GB + microSD kadhi kugona.
Tsvuku: Gigabit Ethernet LAN (RJ45) ine Realtek RTL8211F kiredhiti kadhi, uye inosarudzika USB WiFi adapta.
Kubatana: HDMI 2.0, inoumbwa nevhidhiyo, odhiyo jack, optical SPDIF, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG, 1 UART, 40 pini GPIO pini PWR, SPI, nezvimwe.
Zvokudya: DC jack 5.5mm ine yemukati yakanaka 2.1mm chinongedzo. 7.5v-18V (kusvika pa20w), ine 12V / 2A adapta.
Kushandiswa: mune idle state (IDLE) inoshandisa chete 1.8W approx., nepo painenge iri pakushanda kwepamusoro inosvika 5.5w, uye painodzimwa (kumira-nerambi) inoderedzwa kusvika 0.2w.
Fomu Chinhu (kukura): 90x90x17mm (SBC), 100x91mmx24 (heatsink kana heatsink)
Weight: 190 g ne heatsink
Mutengo: 79 $
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Raspberry Pi » Odroid N2: yakanaka imwe SBC kune iyo Raspberry Pi
RetroPie: shandura yako Raspberry Pi kuita muto-wekutamba muchina
Arduino Ngenxa: zvese nezve izvi zviri pamutemo bhodhi rekuvandudza